Ururka Qareenada Somaliland Ee SOLLA Oo Warsaxaafadeed Kasoo Saarey Magacaabista Gudida Culimada – WARSOOR
Ururka Qareenada Somaliland Ee SOLLA Oo Warsaxaafadeed Kasoo Saarey Magacaabista Gudida Culimada
Hargeysa – (warsoor) — Waxaanu si kooban ugu hadlay magacaabista gudida culimada Somaliland ee u magacaabay madaxwaynaha jamhuuriyada Somaliland .
Gudoomiyha ururka qareenadu isaga oo warsaxaafadeedkiisan kaga hadlay nidaamka loomaray magacaabista gudida culimada in aanay waafaqsanay dastuurka jamhuuriyada Somaliland iyo sida uu xeerku dhigayo.
Habka loo magacaabay maaha mid waafaqsan dastuurka jamhuuriyada Somaliland waana mid ka hor imanaysa dastuurka qarank jamhuuriyada Somaliland isla markaana jidaynaysa masuuliyad daro ka timaada ku dhaqan la’aanta dastuurka jamhuuriyada Somaliland.
Habka loo magacabayo gudida culilmada waxa tilmaamaya Qodobka 119 aad ee dastuurka qarank jamhuuriyada waxanu u dhigan yahay sida tan
QODOBKA 119 ee dastuurka
Magacaabista Xubnaha Gudida Culimada 1- Xubnaha guddida culimada waxa soo magacaabaya guddi laga soo cayimo golaha xukuumadda iyo
Magacaabadan gudidan culilmada waxaa xaq u leh Gudi isku dhafa oo ka kooban golaha xukumada iyo golaha guurtida oo ah tiro is le eeg ah waxana an sixinaya golaha guurtida jamhuuriyada Somaliland. Hadaba madaxwaynaha jamhuuriyada Somaliland uma laha awood u ku magaacaabo gudida culimada jamhuuriyada SomalilandMagacaabista Gudidanina waa qayruldastuuri.
Sidoo kale magacabista gudidani waxay khilaafsantahay QOD 116 ee dastuurka jamhuriyada Somaliland oo si cad u tilmaamaya tirade xubnaha ay noqonayaan gudida culimadu oo ah 11 xubnood balse tirade xubnaha madaxwaynuhu magacaabay oo ka kooban 12 xubnood taasi oo khilaafsan QOD 116. Sharci ahaana ay khalad tahay in la magacaabo tiro buuxda sababtoo ah gudidu waxay go aanada ku gaadhaysaa cod hal dheeri ah. Kuna meel marayaan go aamadoodu balse tiradan madaxwaynuhu waxay abuuraysaa khilaaf iyo muran dastuuriya.
Sidoo kale wax yaabaha ka reeban gudidan culimadu dastuuriga ah in aanay ka tirsanayn hayada ama gudi kale oo qaran sida uu tilmaamayo qod 118 dastuurka jamhuuriyada Somaliland magacaabistan madaxwaynaha waxa ka muuqata in ay khilaafsantahay qodobanka 118 dastuurka jamhuuriyada Somaliland waxana magacaabistiisa ku jira xubno ku jira gudiyo kale oo dastuuriya ah sida gudida cadalada ee jamhuuriyada Somaliland.
Hadaba waxa jirta in aan xukumada Somaliland ixtiraamin kuna dhaqmin dastuurka jamhuuriyada Somaliland mudooyinkii u danbeeyeyn go aamadii ka soo baxay xukumada jamhuuriyada Somaliland ay khilaafsanaayeen dastuurka jamhuuriyada Somaliland hadii aanay xukumadu dastuurka jamhuuriyada Somaliland ee ay xilka ku hayaan. Waxa ka dhalanaya masuuliyad daro sababi karta maamuuska xayuubin.
Sidaa darted ururka qareenadu waxay xukumada ku waaniyanaa in la ilaaliyo laguna dhaqmo dastuurka qaranka iyo xeerarka kale ee ka farcama,.
Waxanan ugu digaynaa xukumadu in ay caadaysato go aamo noocan oo kale ah oo qayral dastuuriya. Gudidana waa in loo maro qaabka u tilmaamayo dastuurka jamhuuriyada Somaliland waxa kale oo aan ku wargalinayaa golaha guurtida in ay waajibaadkooda ka gutaan gudidan qarul dastuuriga ah oo ay tilmaamaan qaabka loo soo xuluyo iyo cida xaqa magacaabida leh.
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Soomaaliya Oo Soo Bandhigtay Waxqabadkeedii Ee Labadii bil Ee La Soo Dhaafay
Madaxweynaha Somaliland oo Golaha Wasiiradda Faray Inay Ilaaliyaan Hantida Qaranka